रूसी पकौडी। लागि नुस्खा
पकौडी - सबै भन्दा प्रसिद्ध को एक रूसी व्यञ्जन, जो तथापि, साइबेरियन Tatars द्वारा गढा र यस्तो इटालियन र चिनियाँ अन्य विश्व व्यञ्जनहरु, थुप्रै समकक्षों छ थियो। तर, कुनै एक हामीलाई जस्तै तिनीहरूलाई मन छैन, र यो स्पष्ट मूल व्यञ्जनहरु ravioli को ठूलो संख्या लगभग हरेक प्रान्त र क्षेत्र प्रदर्शन गरिएको छ। जो केवल fillings, doughs यो पकवान को तयारी र विधिहरू हाम्रो ठूलो देशमा अवस्थित छैन। धेरै परिवार मा, त्यहाँ घरपरिवारको सबै सदस्यहरु भेला र एक महान छुट्टी र सुखी नयाँ वर्ष अगाडि पकौडी sculpt एउटा अद्भुत परम्परा छ। एक ravioli? मात्र हामी एक अलग छ खानपान विभिन्न तरिकामा यो पकवान को तयारी मा विशेष विशेषज्ञ।
पकौडी कसरी बनाउने? एक क्लासिक नुस्खा कीमा बनाएको मासु, पाठो र सुँगुरको को प्रयोग पनि समावेश छ। को कीमा बनाएको मासु मा साइबेरियन क्षेत्रमा माछा संग पकाएको सुदूर पूर्व पकौडी मा एक ठूलो हरिण वा भालु थप्न। त्यहाँ मशरूम र भात, स्क्विड र अन्य समुद्री को भराई छन्। तर सबै भन्दा लोकप्रिय क्लासिक रूसी पकौडी हुन जारी छ। पकाउने को नुस्खा तल परिवारको कान्छो सदस्य गर्न पुरानो देखि, जेनेरेसन गर्न जेनेरेसन देखि बित्यो। यो एकदम सरल छ। कीमा मासु नै अनुपात मा मासु, पोर्क र पाठो देखि फसल। यसलाई प्याज, खुर्सानी र नुन को वाहेक संग एक मासु Grinder मार्फत दुई पटक milled छ, र एक सानो चिसो पानी थप्न। आटा पीठो, अन्डा र पानी एक चौथाई कप को एक र आधा कप देखि बनेको छ। सबै उत्पादनहरु राम्रो मिलाइएको छ र एक सानो नुन थप्न गर्दै छन्, आटा एक ठाडो र कोमल हुनुपर्छ। यसको धेरै सूक्ष्मता लुढका, बाहिर कटौती सर्कल, प्रत्येक कीमा बनाएको मासु र zaschipyvayut छेउको एक बल राखे। दस मिनेट भन्दा अब मसला संग नुनीन पानी उम्लिरहेको मा आटा को "कान" कुक।
गैर-परम्परागत पकौडी। नुस्खा शोरबा
को उम्लिरहेको शोरबा मा पकौडी कम जबसम्म तिनीहरूले सतह देखा मध्यम गर्मी मा दस मिनेट को लागि खाना पकाउन। पकौडी संग शोरबा गर्न पीठो धुन टाढा गर्न तातो पानी मा पीसा धेरै सेकेन्ड लागि तिनीहरूलाई पारदर्शी रहिरहे र त्यसपछि थप पकाउने लागि शोरबा राख्नुभयो।
असामान्य पकौडी। Staraya Russa मा लागि नुस्खा
आटा कचौरा यो पकवान लागि kneaded छ अनाज पीठो, एक अण्डाको पहेंलो भाग, पानी को ग्लास को एक पाँचौं र नुन को एक सानो पिन्च। को भराई लागि एक बगैचा वा वन जामुन वा प्लम लिन र बाक्लो puree मा चीनी संग मसले। आटा को सानो बल tortillas मा लुढका छ, प्रत्येक मा भराई राख्नु र राम्रो, कस nipped। खट्टा क्रीम प्रेमीहरूको संग छर्कियो तयार पकौडी दालचिनी को एक सानो राशि छिडकना गर्न सक्नुहुन्छ।
अपरंपरागत toppings पकौडी थपियो। माछा, च्याउ र भरी स्क्विड को नुस्खा
माछा ravioli लागि Mince सेतो माछा (कड, पोलक, Pike, ling र जस्तै। डी) को fillets परिवर्तन कुनै पनि बनेको छ। पट्टिका प्याज एक मासु Grinder मार्फत milled। कि, कीमा बनाएको नुन र मरिच पछि, पग्लियो घिउ र सबै चलाउनु खन्याउन।
लागि ताजा मशरूम तरल therethrough पूरा लोप सम्म तेल मा निभाउँछ भर्नु। त्यसपछि च्याउ मिश्रण अलग पोलेको प्याज, घिउ, नुन र मरिच, सजातीयता गर्न भड्काए थियो थपियो। मशरूम एक फिलर रूपमा थप लागि गर्न सक्नुहुन्छ उसिनेर चामल वा सूक्ष्मता उसिनेर अन्डा crumbled।
ravioli लागि भराई त्यसो गर्नुभएको स्क्विड संग। धोए र खुली कच्चा स्क्विड टुक्रा मा कटौती र milled। अतिरिक्त कीमा बनाएको सूक्ष्मता कटा प्याज, iskroshennoe उसिनेर अन्डा र वनस्पति तेल, नुन र मरिच थपिएको थियो। यो मिश्रण पकौडी भरिएको र नुनीन पानी मा सामान्य रूपमा उसिनेर थियो।
अपरंपरागत toppings पनि बन्दागोभी, पनीर, प्याज बनाइएका छन्। संग दाल, साग, आदि पकौडी बनाउन
चिकन स्तन स्वाद को अनुरूप संग भरी
गति पत्ता लगाउने र रात दृष्टि भिडियो क्यामेरा
हाम्रो देश मा दिन एक स्काउट मना गर्दा?
वास्तविक प्रश्न: "म एक tampon बालिका उपयोग गर्न सक्छन्?"
फिल्म "लामो रोड": अभिनेता र भूमिकाको
एक inflatable नाउ कसरी चयन गर्ने? सिफारिसहरू अनुभव माझिहरु